Type of server - မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်
ပို့စ် 15 ခုအတွက် 61 ဦးမှ ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောပါသည်။
i mean servers' technical specifications
Last edited by godoflove; 25-10-2009 at 12:31 PM..
Find More Posts by godoflove
30-03-2009, 06:29 PM
ပြန်စာ - sever
2. Audio/Video Servers
3. Chat Servers
4. Fax Servers
5. FTP Servers
6. Groupware Servers
8. List Servers
10. News Servers
11. Proxy Servers
12. Telnet Servers
13. Web Servers
ကြက်ဥလည်းအဲလောက်ပဲတွေ့ပါတယ်...ကျန်တာတွေကိုတော့...တတ်သိနားလည်သူများက ဆက်လက်ဆွေးနွေးသွားပါလိမ့်မယ်.....ဆက်လက်ဝေမျှပေးကြပါဦးနော်...မှားယွင်းတာများရှိရင်လည်း ခွင့်လွှတ်ကြပါ....
(ပြီးတော့....မေးထားတာက....server ကိုမေးတယ်ထင်တာပဲနော်.... sever ဖြစ်နေပါတယ်... စာလုံးပေါင်းမှားတာထင်ပါတယ်....ပညာရှိသတိဖြစ်ခဲဆိုတော့လည်းနော်.... )
အောက်ပါအသင်းဝင်3ဦးတို့မှ ကြက်ဥခေါက်မုန့် အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ဆန်းမောင်, AZM, tu tu
Last edited by godoflove; 02-04-2009 at 12:23 PM..
ကပ်ကြေးတို့ ၊ ပလာယာတို့ ၊ လွှတို့ အကြောင်းကို ပြောပြရမှာလား။ :(
ဟုတ်တယ်နော်.....အဲဒီ sever ဆိုတာ.....Network dictionary မှာတော့မတွေ့မိဘူးရှင့်....
အင်္ဂလိပ်-မြန်မာအဘိဓါန်မှာတော့.....ဖြတ်တောက်သည်၊ အဆက်ဖြတ်သည်၊ လမ်းခွဲသည် .....ဆိုပြီးတွေ့တယ်ရှင့်....ဘာကိုဆိုလိုတာလဲမသိဘူးနော်....
ကျွန်တော်လည်းဗဟုနဲ့သုတနည်းတာလားတော့မသိဘူးဗျ။ အဲဒီဟာကြီးကိုတော့ နက်ဝက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမကြားဘူးဖူး။
ကော်နက်ရှင်ဖြတ်တာတောက်တာလား။ ပိတ်တာဆို့တာလား အဲဒါမျိုးကိုပြောတာလား လုပ်ပါဦးဗျိုးစဉ်းစားမိသလောက်တော့ မသိဘူးဗျာ။...
server type and technical specification ကို ပြောတာပါ.
အဲဒါကိုနည်းမလည်သေးဘူး။ ဟဲဟဲ ။သိရင်လည်းသင်ပေးပါဦးဗျာ။ ခံယူလျက်
Originally Posted by godoflove
စာရိုက်ထားတာကို ပြန်ဖတ်ကြည့်ပါဦး . သူက ရိုက်တာမှားပြီးတော့ သူများကို ပြန်ဟောက်နေတယ် .
server လို့ ရိုက်ရမှာကို sever လို့ရိုက်ထားတာကို ပြောနေကြတာ .
25-10-2009, 12:33 PM
ပြန်စာ - Type of server
i forgot r
ကျွန်တော်တို့ကserver မေးတော့ဟုတ်ဘူးတဲ့အခုကျတော့ ဟုတ်တယ်တဲ့ဗျာတူပဲအမျိုးမျိုး.....
<<<< server type and technical specification ကို ပြောတာပါ.
ဆရာကြီးလေသံနဲ့ပါလား....ဟိဟိ...နောက်တာနော်.... 4: :
Last edited by လူမုန်း; 01-07-2014 at 04:36 PM..
မြန်မာလိုပဲ ပြောကြပါစို့ ဗျာ။
server ဆိုတာ မြင်လွယ်အောင် ပြောရရင်တော့ user pc အကြီးစားတွေပေါ့။ စွမ်းဆောင်ရည် အရမ်းကောင်းတဲ့ ၊ တစ်ချိန်ထည်းမှာ တစ်ကြိမ်ထည်းမှာ အလုပ်တွေ အများကြီး လုပ်နိူင်တဲ့ computer ကြီးတွေပေါ့။
အဲဒီလို computer ကြီးတွေပေါ်မှာမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခု လည်ပတ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ application တွေ run ကြတာပေါ့။ ဥပမာ database server ဒါမှမဟုတ်လည်း file server ပေါ့။ အဲဒီလို application တစ်ခု run လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါ အဲဒီ server ကြီးက အစောကလို အမာထည် သက်သက်မဟုတ်တော့ဘဲ application server ဆိုပြီး ဖြစ်လာတယ်။ အဲဒီ server ပေါ်မှာ run ထားတဲ့ application ရဲ့ နာမည်နဲ့ယှဉ်တွဲပြီး server နာမည်ကလည်း database server, file server စသည်ဖြင့် ခေါ်ဝေါ်ကြတယ်။
ဆာဗာအမည် မှာက အမျိုးမျိုး ရှိနိူင်ပါတယ်။ ရေတွက်ကြည့်ဖို့ဆိုတာကလည်း လက်တွေ့ သိပ်မကျပါဘူး။ နည်းပညာဆိုတာ business ရဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးရတာမို့လိုအပ်လို့တောင်းဆိုလာတဲ့အခါ အမျိုးအစား တစ်ခု အနေနဲ့ပေါ်ပေါက်လာရပါတယ်။ ဥပမာ email server, file server, voip server, video conferencing server စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ ။ နောက်ပြီး ရှိနေပြီးသား application server တစ်ခုကို ပိုကောင်းအောင် တီထွင်ကြံဆကြရင်း နောက်ထပ် အမည်တစ်မျိုး နဲ့ပိုကောင်းတဲ့ server တစ်မျိုးထပ်မံ ပေါ်ထွက်လာတတ်တာမို့နာမည်တွေကိုသာ ရေတွက်ပြီး ပြောကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် ကုန်နိူင်ဖွယ်ပေါ့ ဗျာ။
အခုနောက်ပိုင်းမှာကျ အဲလို ဆာဗာအစုအဝေးကြီး တစ်ခုလုံးကို Solution ဆိုပြီး ခေါ်ဆိုသမုတ်ကြပါကြောင်း ။
အောက်ပါအသင်းဝင်4ဦးတို့မှ xray အား ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသွားပါသည်။
ကိုပိုင်, ဆလိုင်းသန့်ဇော်ဝင်း, ဖိုးသားလေး89, zawlearn